I-App.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli se-Apk Ukulanda i-Android
Apps Ikhasinkomba Social
»App.Xiaomi.Com Tiktok Editor Apk Thwebula For Android
4.5 / 5 ( 22 amavoti )
I-TikTok ivinjelwe emazweni ehlukene futhi ukubona le nkinga silethe uhlelo olusha lwe-android olungehlukile kwe-TikTok futhi igama lokusebenza lingu-App.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli. Kuze kube manje lena enye indlela enhle kunazo zonke i-Apk engeniswa abathuthukisi.
Namuhla iTikTok iyona ethambekele kakhulu kwi-Social Media App phakathi kwabasebenzisi be-android efinyeleleka ukulanda nge-Google Play Store. Idume kakhulu phakathi kwentsha futhi ngenxa yokwanda kokuthandwa kwayo manje abantu abadala nayo bayayisebenzisa njengokuzijabulisa ukukhulisa abangane babo namalungu omndeni.
Kepha ngenxa yezizathu ezithile, iTikTok ivinjelwe ngaphakathi emazweni ahlukene njenge-India, Saudi Arabia ne-UAE njll. Uma kucatshangelwa abathuthukisi besimo sanamuhla banquma ukudala i-apk enjalo esebenza nge-TikTok.
Ngaphandle kwalomhleli weXiaomi Tiktok kwenziwa. I-Apk ihlanganisa izici ezifanayo ezikhona ngaphakathi kweTikTok kodwa banezela le nkampani entsha ngaphakathi ebizwa ngeSocial Media Counter. Ukusuka lapho ababukeli bangabelana khona ngesithinjana sevidiyo ngqo ngaphezulu kwamaForamu Ezezindaba Zenhlalo ahlukahlukene.
Inkinobho Yokulanda Ngokuqondile inika amandla ababukeli ukulanda iziqeshana zevidiyo eziyizintandokazi ngaphakathi kwama-Smartphones abo. Uma efuna ukudala imininingwane lapho angagcina khona, abelane futhi abuke amavidiyo kamuva ngesikhathi samahhala.
Yini i-App.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli
Izici Key zohlelo lokusebenza
Ungalanda kanjani uphinde ufake i-App
Kuyinto isicelo Android athuthukiswe ikakhulukazi ukugxila kulabo abasebenzisi android abangenakho ukufinyelela TikTok futhi ivinjelwe unomphela ngaphakathi ezweni labo. Ukulanda le Apk kuzokwenza umsebenzisi akwazi ukudala amavidiyo amancane afaka izihlungi ezahlukene bese abelana ngawo ngamaqembu nama-akhawunti ahlukile.
Ngisho nezinye Izindlela Zokubala Zezenhlalo ezihlukene zengezwa ngaphakathi kohlelo lokusebenza ukuze zenze umenzi azazi ngenani lamasheya nezinto azithandayo. Ngenxa yezici zayo ezihlukile nezishukumisayo, le nkundla emfushane yevidiyo iphinda idume kakhulu phakathi kwabasebenzisi ngesikhathi esifushane.
Inhloso enkulu yokuhlinzeka ngale Apk ukuhlinzeka ithuba lokusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza kuneTikTok. Uma ufuna enye indlela yeTikTok kunokuba sincoma ukuthi ufake le Apk ngaphakathi kuselula yakho. Siyakuqinisekisa ngeke kukudumaze.
Igama Uhlelo lokusebenza.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli
Usayizi 80.55 MB
Igama lephakheji com.ss.android.ugc.aweme
Ingxenye ethokozisayo ngalolu hlelo lokusebenza ukuthi ungabona futhi uhlangane ne-super oyithandayo iqala ukulandela ama-akhawunti abo. Yebo, usizwile kulungile, ama-superstars angabezimboni ezahlukene zamafilimu futhi asebenzisa le nkundla ukujabulisa abalandeli bawo ngesikhathi esifanele.
Uhlelo lokusebenza lukhululekile ukulanda nokufaka ngaphezu kwama-Smartphones. Uma ufuna ipulatifomu lapho ungakhombisa khona ithalenta lakho ngendlela yeziqeshana ezimfushane. Ngaphandle kokuthi le Apk iphelele, vele uthephe inkinobho yokulanda bese ukhombisa ithalente lakho emhlabeni wonke.
Abasebenzisi abanamakhono kangaka be-android abakholelwa ukuthi ikhono labo liyingqayizivele futhi liyathandeka kunokuthi enze abanye abantu bazi ngekhono lokuqopha amavidyo kliphu amancane.
Izibukeli zingafunda amakhono ahlobene nezinkambu ezahlukene ngokubuka lezi ziqeshana zevidiyo.
ISuper Stars ingeyezimboni ezahlukahlukene zamafilimu nayo iyatholakala ukulandela.
Ngisho nombukeli angabuka futhi alandele izinkambu ezihlukile. Uma ethanda umculo adinga ukulandela isigaba somculo. Isigaba somculo sifaka umculo we-opera, we-classic, rock kanye ne-base.
Inqubo yokulanda ilula kakhulu futhi kulula ukuyenza. Konke okudingeka ukwenze nje chofoza inkinobho yokuxhumanisa futhi ukulanda kwakho kuzoqala ngokuzenzakalela. Senza isiqiniseko sokuthi sinikezela ngesixhumanisi sakamuva sokulanda i-App.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli ngaphakathi kwendatshana.
Lapho usuqedile ngokulanda isinyathelo esilandelayo ukufaka nokusebenzisa i-Apk. Noma zilula, ngosizo lwabasebenzisi sinikeze isinyathelo ngasinye lapha.
Okokuqala, iya kusigaba sama-mobile storages bese uthola ifayela le-Apk kusuka kuFolda Yokulanda.
Chofoza ku-Apk ukuqala inqubo yokufaka.
Uma isifakiwe ngokuphelele, iya kumenyu yeselula bese uqhafaza kusithonjana sohlelo lokusebenza.
Ngemuva kokuvulwa kohlelo lokusebenza, unokufinyelela kokuqukethwe kwezokuzijabulisa okungenamkhawulo mahhala.
Ungazama futhi Izindlela Ezilandelayo Ezingeku-Tiktok.
Sikholelwa ukuthi kuze kube manje lokhu esikhundleni seTikTok esihle kunazo zonke. Abasebenzisi be-Android bangayilanda lapha mahhala. Ngenkathi ulanda noma usebenzisa i-Apk, uma uhlangabezana nanoma iyiphi inkinga zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi. Ithimba lethu lochwepheshe lizokufinyelela lapho nje sesithola umbuzo wakho.
Uhlelo lokusebenza.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli
Uhlelo lokusebenza.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli Apk
Uhlelo lokusebenza.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli sohlelo lokusebenza